Microstation V8i, iimfuneko zokuqala - iGeofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/I-Microstation V8i, imfuneko
Sele ndiyifumene inguqulelo entsha yeMicrostation V8i, ndinalo ixeshana kuba ndicele izinto ze-Architecture, Ubunjineli kunye neGeospatial. Ukucela i-SelectCD kwenziwa kwifayile ye- Ikhasi lokukhuphela eBentley Ngokukhetha i-akhawunti yomsebenzisi, iinkqubo zikhethwa kwaye zithunyelwa ekhaya lakho nge-UPS.
Imfuneko kunye nokufakela
Iimfuno ezifunekayo kufuneka zifakwe kuqala, nto leyo eyi-283 MB enokuthi iqulethe:
I-Windows Installer Version 3.1v2, ngokuqhelekileyo ukuba unayo i-XP akufanele ibe yingxaki.
I-Microsoft XML Parser (MSXML) 6, i-1 Service Pack ye-32 bits
I-MSXML iphinda iza kwi-64 bits xa isebenza
IMicrosoft ebonakalayo yeSiseko seZicelo eziphambili
IMicrosoft Visual Basic for Applications localized
Ulawulo lwe-DHTML lokuhlela kwiZicelo.
Ekuqaleni kuthatha ixesha ukulayisha, kukulungele ukuyikopisha kwi-hard drive kwaye ukusuka apho uyenze ngaphandle kweCD.
Kuyathakazelisa ukuba i-autorun iqulunqwe ukuba isebenze kwisikhangeli, ngohlobo lwefayile: /// D: / microstation / lawulo olusebenzayo. Okwangoku ukufakwa kweMicrostation V8i kuvumela ukhetho lokutsala isifaki okanye ukukhupha kunye nokufaka kwangoko, njengoko i-282 MB iyaphunyezwa
uqobo lwayo lucwecwe oluqulathe amanye amaza. Ekupheleni kofakelo, olukhawulezayo kodwa olushiya umatshini kancinci ukuba usetyenziswa, ivumela ukusebenza kwewizard yokuvula ilayisensi kwangoko kwaye kwimeko yokuba nelayisensi enye yeXM esebenzayo, iyayamkela isitshixo.
Apho ndikuxelela ngokuzayo indlela endiyenza ngayo entsha ithoyiyi ...
yokungena, njengokuba njalo, inxibelelwano efanayo ukuba ungabikho, nangona ngoku ukufikelela kwimenyu ephezulu kudibeneyo, eyayihlala inamanyathelo amabini, njenge-UCS, iiseli, phambili, kwaye apho kufuneka ukhangele indlela kwipaneli ecaleni leethuluzi ehlelwe ngayo, eyona inveli entsha ... mmm ... Ndiyibone le nto phambi ... yintoni efana ...?
Ijongeka inomdla kwiMicrostation V8i yinkqubo ebalaseleyo yeCadastre